9 Tirakoobka Saamaynta Khibradda Isticmaalaha Mobilka | Martech Zone
Weligaa ma sameysay raadinta boggaaga Google oo ma aragtay Mobile-Friendly ku calaamadee? Google xitaa wuxuu leeyahay a bogga tijaabinta moobiilka halkaas oo aad ka eegi karto arrimaha ku saabsan bartaada. Waa tijaabo aad u wanaagsan oo falanqeysa walxaha oo hubisa inay si fiican u kala fog yihiin oo muuqdaan. Mobile-friendly ma ahan moobaylka oo la hagaajiyay, in kastoo. Kaliya waa aasaasiga mana fiirinayo habdhaqanka isticmaalaha dhabta ah ee isticmaaleyaasha mobilada bartaada.
Milkiile kasta oo ganacsi oo casri ah goor dhow ma lahaan doono ikhtiyaar ikhtiyaar ah - waa inaad lahaataa joogitaan toos ah oo mobiil ah oo khadka tooska ah ka shaqeeya, ma aha oo keliya caawinta macaamiishaada moobiilka, laakiin inaad iyaga ka hesho meesha ugu horreysa! Rahul Caalim, CustomCreatives.com
A bogga jawaabta leh taasi waa la hagaajiyay isticmaalaha moobiilku wuxuu leeyahay faa'iidooyin aan caadi ahayn. Marka hore, isticmaalaha booqda labada desktop iyo mobile wuxuu lahaan doonaa khibrad la mid ah, iyaga oo awood u siinaya inay maraan oo ay helaan macluumaadka ay ugu baahan yihiin si fudud. Marka labaad, calaamadeynta ayaa u dhigmaysa si qurux badan. Ta saddexaad, degelku si dhakhso leh ayuu u buuxin karaa… halkii uu ka rogi lahaa taraafikada, CSS waxay qaadaysaa culeyska culus
Maxaad waqti ugu qaadaysaa isku-hagaajinta moobiilka? Waa kuwan tirakoobyada 9 oo caddaynaya soo noqoshada maalgashiga ku habboon khibradaada moobiilka:
33% dhammaan iibka suurtagalka ah ayaa guuldaraysta markii websaydh ganacsi 'aan moobiil lagu hagaajin
40% dadku waxay raadinayaan goob kale haddii natiijada ugu horreysa aan mobilada wax laga beddelin
45% dadka da'doodu tahay 18-20 waxay isticmaalaan taleefannadooda casriga ah si ay internetka uga baaraan maalin kasta
80% macaamiisha ayaa dhammeystiraya ugu yaraan qaar ka mid ah wax iibsiga iyaga oo adeegsanaya taleefannada casriga ah bil kasta
67% dhamaan milkiilayaasha mobilada waxay isticmaalaan taleefannadooda casriga si ay u baaraan webka
25% dadka isticmaala internetka ee ku nool Mareykanka kaliya waxay marin uga helaan shabakadda aaladda moobaylka
61% macaamiisha ayaa fikrad fiican ka haysta shirkadaha leh khibrad moobiil oo wanaagsan
57% dadku kuma talinayaan ganacsi haddii uu leeyahay wax ka yar meeshuu ku socdo
70% dhammaan baaritaanka mobilada tooska ah waxay horseedaa in macaamilku tallaabo ku qaado saacad gudahood
Tags: Naqshadaynta mobilkaNaqshadeynta mobiladahagaajinta mobiladataleefanka gacantatirakoobka wareegatirakoobka isticmaalka mobiladawaayo-aragnimada isticmaalaha moobiilkamobilada uxNaqshad wax ku ool ah
Jun 6, 2016 saacadu markay ahayd 9:04 AM
Waxay umuuqataa inbadan oo kamid ah xogtani inay dib udhigantahay 2013-2014 (muuqaal quruxsan oo noocan oo kale ah oo xawaare sare ku socda, waligeedna isbadalaya muuqaalka tikniyoolajiyadda). Ma jiraan wax tirakoob ah oo dhowaa?
Jul 2, 2016 markay ahayd 2:22 AM
Haye Douglas, Joogitaanka moobiilku waa waajib ganacsi kasta, runtiina waa la yiri. Kaliya maaha inay kordhiso suuqa bartilmaameedka oo ay fududeyso laakiin sidoo kale waxay noqon kartaa sida ugu fiican ee lagu kasbado isticmaaleyaal cusub oo ay ku heli karaan meesha ugu horeysa. Maaddaama meherad kastaa ay tahay inay ahaato mid ku tiirsan macaamiisha si loogu guuleysto, bogagga internetka ee moobiilku ku habboon yahay waa inay adduunka ku noqdaan dijitaal maalinle ah. Mahadsanid badan!